Maxaa loola jeedaa miisaaniyada dhaqaalaha? Qeexidda ereyga maaliyadeed
Start daymaha -Leaks si maalgelinta
Maxay tahay maalgelinta dalabka?
ka si maalgelinta waa sida magaca uu ka dhigayo maalgelinta amarrada ay shirkadu hesho. Fikradda diirada saaran waxay ku jirtaa maalgelinta ka horeysa alaabta iyo alaabta. Dammaanadda cusub ee abuuray nidaam maalgelin ah ayaa shirkadda siinaysa fursad ay ku aqbalaan amarro waaweyn ama amarro badan oo isku mid ah. Suurtagalnimada waxaa si gaar ah loo tixgeliyaa ganacsatada dhexdhexaadka ah. Hase yeeshee, shirkado waaweyn ayaa sidoo kale qayb ahaan u isticmaalaan ikhtiyaarkan si ay u maalgeliyaan mashaariic waaweyn. Farqiga u dhexeeya maalgelinta caadiga ah ayaa halkan ku jira sheyda si loo maalgeliyo. Tani waa sababta oo ah, sida caadiga ah, maalgelinta soo iibsiga waa alaab ama alaab la siiyay macaamiisha. Tani ma ahan maalgelin shey oo qeexaya qiimo gaar ah.
Waa maxay faa'iidooyinka?
Faa'iidooyinka maalgelinta qandaraaska waxay la mid yihiin kuwa a bond bedeli sidoo kale halkan mar hore waxaa ku jira dulsaarka. Sida caadiga ah, heerka dulsaarka ayaa ku jira qiyaasta qiimaha dhimista ee caadiga ah. Sidaa darteed, kuwani waxay si cad uga hooseeyaan dulsaar heerka caadiga ah oo ay bixiso bangi si deyn ah. Intaas waxaa sii dheer, ereyga dib u bixinta sidoo kale waa mid isbeddela. Sababtoo ah halkaan waxaa sidoo kale si buuxda ugu jira amarka kala duwan ee loo maalgeliyo. Daaqad go'an oo gaar ah ayaa lagu qeexay amar kasta. Dib-u-bixinta maal-galinta lacageed ayaa sidoo kale ku salaysan arintan. Dabcan, waa in la ogaadaa in ay jirto kala duwanaansho sababtoo ah tirada amarada. Haddii ay jirto hal amar oo keliya oo ah maalgelinta loo isticmaalayo maalgelinta, ama su'aasha la buuxiyo, waqtiga daaqada waxaa lagu qeexi karaa si kaamil ah. Haddii amarka maalgelinta ay tahay maalgelin amarro dhowr ah, waxaan u baahanahay inaan barto daaqada wakhtiyo kala duwan. Sababtoo ah dhererka dhererku wuxuu ku kala duwanaan karaa amarro, daaqada ugu weyn ayaa sida caadiga ah loo adeegsadaa qiimaha. Sidaa darteed, ereyga dib u bixinta si fudud ayaa loo fududeeyaa. Tani waa faa'iido ma aha oo kaliya shirkadda laakiin sidoo kale bangiga u gaarka ah. Faa'iidada kale ee lagama maarmaanka u ah shirkadaha waa muddada fasaxa. Helitaanka raasumaalka loo baahan yahay waa la qaban karaa waqti gaaban. Kani waa faa'iido weyn oo ka duwan deyn caadi ah. Tani sidoo kale waa qodob muhiim ah oo lagu ogaanayo hal ama dhowr amarro. Maaddaama kuwani ay ku xiran yihiin daaqada go'an, habka dhaqaale ee dhaqsaha ah ayaa si aad ah muhiim ugu ah.
Gabagabeynta nidaamka maalgelinta
Marka la soo gabagabeynayo maalgelinta dalbashada, mid ka mid ah halkan ayaa laga yaabaa in ay ugu horeyntii qabtaan in tani ay tahay xal fiican oo lagu xaqiijinayo mashaariic waawayn, taas oo sidoo kale keenaysa faa'iido badan. Intaa waxa dheer, heerka dulsaarka hooseeya waa in sidoo kale lagu muujiyaa halkaan. Kuwani, dabcan, waa dood muhiim ah ee shirkadaha si ay u tixgeliyaan suurtagalnimada noocaas ah. isla sidaas waxay quseysaa wakhtiga yar ee looga baahan yahay bixinta raasumaalka loo baahan yahay. Qodobkani wuxuu u sareeyaa heerka dulsaarka hooseeya. Amar la'aan dhaqaale la'aan ah, amar lama ogaan karo daaqada la rabay. Tani waxay horseedi doontaa gebogebo ah in shirkaduhu ayan fulin karin qandaraas quseeya waqtigaa oo sidaas darteed ma aqbali karo. Sababtan awgeed, amaahda amaahda ee dulsaarka dulsaarka iyo kharashka wakhtiga caadiga ah ee shirkadaha laguma tixgeliyo xaaladdan.
Maqaalka horedaymaha madaxfurashada
Maqaalka xigtaogeysiis mudnaanta